पू’र्व म्यानेजर दिशा र सुशान्तको दे’ह त्या’ग बिच भेटियो ग’हिरो सम्बन्ध ! – Sandesh Munch
पू’र्व म्यानेजर दिशा र सुशान्तको दे’ह त्या’ग बिच भेटियो ग’हिरो सम्बन्ध !
June 25, 2020 305
मुम्बइ। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आ’त्म ह’त्याको बिषयले निकै चर्चा पायो । अनुसन्धानका क्रममा पुलिसले उनको घरमा काम गर्ने कामदारहरुको पनि बयान लिएको छ । पुलिसलाई दिएको बयानमा उनको घरका स्टाफले सुशान्तले आ’त्मह’त्या गर्नुभन्दा तीन दिन अघि नै आफूहरुको सबै पारिश्रमिक दिएको बताएका छन् ।रिपोर्टका अनुसार केहि समयदेखि बिभिन्न फिल्मबाट सुशान्त नि’कालिएको बताइएको छ । यसैक्रममा उनकी पू’र्व म्यानेजर दिशा सलियनको सहयोगबाट १४ करोडको एक वेब सिरिजको कन्ट्रयाक्ट प्राप्त हुनेवाला थियो । तर, दिशाले सुशान्तले भन्दा ६ दिनअघि ८ जूनमा आ’त्मह’त्या गरेकी थिइन् ।
सुशान्त र दिशाको बीचमा मार्चमा २ पटक वेब सिरिज प्रोजेक्टका विषयमा कुरा भएको थियो । दिशाको मृ’त्युले सुशान्त डि’प्रेसनको ग’म्भीर अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।
एक पुलिस अधिकारीका अनुसार जाँचमा दिशा र सुशान्तबीच कुनै प्रोजेक्टका विषयमा ह्वाट्सएपमा कुरा भएको पाइएको छ । मिड डेको रिपोर्ट अनुसार सुशान्तका हालका म्यानेजरले सुशान्तलाई सान्त्वना दिएको बयान दिएका छन् । उनका अनुसार सुशान्त आर्थिक सम’स्याले ग्रस्त थिए र उनीसँग अहिले कुनै काम थिएन । पछिल्लो समय उनले यो’जनाबद्ध रूपमा कैयौं प्रोजेक्टहरु गु’माएका थिए । जसका कारण पनि भारतमा अहिले केहि स्टार, स्टार किड र केहि समूह भा’रतिय दर्शकको तारो बनिरहेका छन् ।
Prevचर्को घामले कोरोना भाइरस मार्न सक्छ- अध्ययन
Nextइन्स्टाग्राममा सलमान, आलिया, सोनाक्षी र करणका फलोअर तीव्र गतिमा घट्दै, जान्नुस् कसको कति घटे?
‘बाटोमा भेट्टाएकोपैसाले तपाईंकोभाग्य बदल्न सक्छवास्तुशास्त्र